चिनियाँ कवि माजियाको कवितासङ्ग्रह ‘आमाको हात’ नेपालीमा अनुवाद
चिनियाँ हिमाली कवि जिदी माजिया
काठमाडौँ । चिनियाँ हिमाली कवि जिदी माजियाद्वारा लिखित कवितासङ्ग्रह ‘मदर्स ह्याण्ड’को नेपाली अनुवादसहित ‘आमाको हात’ प्रकाशनमा आएको छ ।
निराला पब्लिकेशन्स नयाँदिल्लीले प्रकाशन गरेको द्विभाषी सो कृति युयुत्सु आरडी शर्माले अङ्ग्रेजीबाट अनुवाद गरेका हुन् ।
माजियाका कवितामा नेपालसँग मिल्दोजुल्दो विषय भएकाले र विश्वको कविताको प्रवृत्ति चिनाउन आफूले नेपालीमा कविता अनुवाद गरी प्रकाशनमा ल्याएको अनुवादक शर्माले बताए । “ यस सङ्ग्रहका माध्यमबाट अनुवादका लागि उपयुक्त कार्यशाला पनि चलाउन सकिन्छ”, शर्माले भने ।
सङ्ग्रहमा प्राकृतिक सौन्दर्यको अनौठो चित्रणका साथै चीनको प्रतिविम्ब भेट्न सकिने उनको भनाइ छ । चीनले माजियाको काव्य ऊर्जाबाट आफूलाई प्रस्तुत गरेको विचार पनि शर्माले व्यक्त गरे ।
काठमाडौँ । चिनियाँ हिमाली कवि जिदी माजियाद्वारा लिखित कवितासङ्ग्रह ‘मदर्स ह्याण्ड’को नेपाली अनुवादसहित ‘आमाको हात’ प्रकाशनमा आएको छ । निराला पब्लिकेशन्स नयाँदिल्लीले प्रकाशन गरेको द्विभाषी सो कृति युयुत्सु आरडी शर्माले अङ्ग्रेजीबाट
२३ लिम्बु कविहरु सम्मिलित कविता तङसिङ-२०७६ हुने
काठमाडौँ । याक्थुङ लेखक सङ्घ, उपत्यका समितिको आयोजनामा २३ जना लिम्बु कविहरु सम्मिलित कविता तङ्सिङ् -२०७६ हुने भएको छ । यही भदौ २८ गते, शनिबार राष्ट्रिय नाचघरको मिनीहलमा दिउँसो १२:३० बजे
बाबा ! कसरी बिर्सुँला र म ?
आमा मामाघर जाँदा मैले पकाएको भात डढेपछी मलाई भोक छैन, तिमी माथी माथीको झिकेर खाउ भनेको कसरी बिर्सुँला र म? स्कुलमा खेल्दा लडेर जिउ भरी घाउ बनाएर आउँदा मेरो रोदनले रसाएका हजुरका